Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka oo kulan dedg deg ah isugu yimid – Kalfadhi
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka oo kulan dedg deg ah isugu yimid
Sida uu baahiyey Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabka, waxaa goordhaw furmay Kulanka 3-aad ee Guddiga Joogtada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kaas oo inta badan curiya, kana shaqeeya soo gudbinta ajandayaasha Golaha Shacabka.
Kulanka hadda furmay waxaa shir-guddoominaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, waxaana wararku sheegayaan in ajandaha kulanka guddiga uu yahay: 1) xaqiijinta in Kulamada Golaha Shacabka aysan Kooram la’aan noqon iyo 2) in dib-u-eegis lagu sameeyo Ajandayaasha Golaha.
Kulankan ayaa imaanaya iyada oo uu Golaha Shacabka ku guul-dareystay laba jeer inuu qabto Kulanka 1-aad ee Golaha, waxaana taas aad uga xumaaday Xildhibaannada Golaha soo xaadiray, oo qaarkood sheegay in sababta uu Kooramka Golaha u dhameystirmi la’yahay ay tahay ku dhawaad 50 Wasiir oo Xildhibaanno ah, oo ka maqnaa Kulamada Golaha.
Laakiin, dib-u-eegista Ajandaha Kulanka 1-aad ee Golaha ayaa iyana imaaneysa iyada oo ay Xildhibaannada qaar dalbanayeen in Ajanadaha Kulanka 1-aad ee Golaha laga dhigo mid ku saabsan Xaaladda Amaanka Dalka, gaar ahaan tan Muqdisho, oo ay todobaadyadii ugu dambeeyey hareeyeen qaraxyo.
Lama oga in ay dib-u-eegista uu Guddiga Joogtadu ku sameynayo Ajandayaasha Kulamada Golaha ay wax-ka-bedeli karto siduu markii hore ahaa iyo in kale. Kulnaka 1-aad ee Golaha Shacabka ayaa haddii uu furmi lahaa Sabtidii ama Maanta waxa uu Ajandaha horyaal ahaa Dhageysiga Warbixin uu Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka siin lahaa Golaha, taas oo ay Xildhibaanno badan diidan yihiin.
Xildhibaan Fiqi: Waxaan ayidayaa in la soo qabto dambiilihii dilay Bajaajlaha
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabka oo ka hadlay baaqashada kulamadii ugu dambeeyay